Waxaa jira sirta aad u badan oo aan u baahanahay in si xusuusan u fududahay in la ilaawo sirta ah kuwaas. Laakiin technology hadda bixisaa saldhig u ah arrinkaas sirta ah maamulaha. Qalab loo isticmaalo in lagu crack sir ah ku xiran tahay nidaamka qalliinka lagu rakibay ee mishiinka. Waxaan leenahay daaqadaha kala duwan oo ka hawlgala nidaamyada sida daaqadaha 7, daaqadaha 8, XP daaqadaha iyo daaqadaha Vista iwm qalab cracker Password yihiin labada macquul ah loo isticmaalo inuu ka soo kabsado sirta ah maamulaha ama loo adeegsaday haakarisku ujeeddooyinkooda xanuunsan.
Waxaa jira qalab badan oo arrinkaas password daaqadaha inkastoo aynu doonayno inaynu u wada hadlaan shan ka mid ah inta badan la isticmaalo sida shaxda hoos ku qoran:
Top 5 daaqadaha qalab kabashada password
Operating System taageeray
Ophcrack software Si ay u soo bixi Free Windows XP, 7,8 & Vista
Password offline NT iyo Diiwaanka Editor Si ay u soo bixi Free Windows XP, NT, Vista, 7,8 & 2000
John Ripper ah Si ay u soo baxdo iyo il furan laakiin iibsan wordlists Free Windows XP, Windows NT, 2000 & Vista
Knoppix Live CD Si ay u soo bixi Free Windows XP iyo qoraalkii hore
Qalab Recovery Login Free download Windows NT, 2000, XP iyo Vista.
Description of walba daaqadaha password qalab arrinkaas
1. Isticmaalka software Ophcrack
Tani waa mid ka mid ah buskudka daaqadaha qalab wanaagsan ee loo yaqaan. Waa lacag la'aan ah oo si sahlan loo isticmaalo bixiyo user uu leeyahay aqoonta qaar ka mid ah oo isticmaalaya daaqadaha. Kuwaas oo qalab soo kabashada daaqadaha waxaa loo isticmaalaa in ku dhowaad dhammaan daaqadaha ka hawlgala nidaamyada XP tusaale ahaan daaqadaha, Windows 8, Windows 7 iyo Windows Vista.
Marka aad u baahan tahay inuu ka soo kabsado password maamulka la isticmaalayo qalab Ophcrack, waxa kaliya ee aad u baahan tahay in ay leeyihiin waa CD madow ah, helitaanka internet oo ay awoodaan si ay u isticmaalaan gal computer kale si aad u gubi karaa digsi Compact ah. Waxaad u baahan tahay in la isticmaalo computer kale si ay u soo bixi image ISO ka ah goobaha Ophcrack ka dibna gubi in CD, DVD ama flash drive ah oo ku sii ahaan. Marka kabaha daaqadaha hubi account maamulka iyo soo kabsado sirta ah. Software waxan sameeyo si toos ah iyo waxa ay soo kaban karto, nooc kasta oo password loo eegin qaabka loo isticmaalo inta lagu jiro abuurka sirta ah. Qaar ka mid ah sirta ah ee arrinkaas qalabka waxaa lagu iibsaday halka kuwo kale ay si xor ah bixi internetka.
Password 2. offline NT iyo Diiwaanka Editor (ONTP & RE)
The password offline NT iyo Diiwaanka Editor shaqeeyaa fiican sida qalab keddibna sirta ah halkii qalab soo kabasho. Waxaa taas ku gaadhaysaa iyadoo la tirtiro sirta ah iyo sidaas tagay sir ah aan dhadhan lahayn u user.
Qofka arrinkaas ayaa loo baahan yahay si ay u soo bixi software free ka password offline NT iyo file Registry Editor ISO oo way gubi doonaan kaydinta a yihiin sida CD, DVD ama flash drive. Markaas kabaha computer ka qalab gubay oo aad si fudud u gali kartaa oo aan u baahan in sirta ah. Software waa mid aad u sahlan haddii aad jeclaan lahayd in ay masixi sirta ah.
The Password offline NT iyo Diiwaanka Editor qalab waa mid aad la socon versions qaar ka mid ah daaqadaha sida Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP, Windows 2000 iyo Windows New Technology. Inta lagu jiro xaaladaha qaarkood, barnaamijkan u baahan yahay line amartaa inay u isticmaalaan, laakiin waxaa aad u sahlan in ay raacaan tilmaamaha ah ee isticmaala sare ilaa aad ka dhex la tirtiro sirta ah.
3. John Ripper ah
John Ripper waa software cracker password taasoo loo arko in lacag la'aan ah, inkastoo mararka qaar waxa ay u baahan tahay iibsaday wordlists maxaa yeelay, waxay si crack sirta ah. Software kani waxa uu isticmaalaa line amarka ah iyo sidaas oo keliya ku haboon u isticmaala xagjirka ah. John Ripper si fiican u la shaqeysaa dhowr nooc oo daaqadaha sida daaqadaha 7, Windows 8, Windows Vista oo XP.This codsiga waa mid aad loo jecel yahay oo si sahlan ay u isticmaalaan in ay dhacdo mid ka mid ah uu leeyahay qaar ka mid ah aqoon daaqadaha.
4. Knoppix ku nool CD
The CD live Knoppix waa nidaam Linux software in sida caadiga ah waxay ka caawisaa in ay dib sirta ah. Waxaad dib sirta ah by booting computer ka Knoppix ku noolaan CD.Then dooro sirta doorasho dib kaas oo kuu ogolaanaya in aad dib sirta ah isla markiiba aad computer ku guuleysatey. Password ugu fudud ee crack waa mid ka mid ah la characters xadidan iyo haddii sirta ah waa qayb yar oo gaaban. Markii qaar ka mid ah sirta adag ayaa loo isticmaalaa, nidaamka qalliinka waxay u baahan tahay in la meeleeyey.
Software Tani waxay si fiican u la shaqeysaa XP daaqadaha iyo qoraalkii hore.
5. Login qalab kabashada
Qalabka kabashada login si fiican u la shaqeysaa Windows NT, 2000, XP iyo Vista. Waxay u baahan tahay marka hore in laga soo degsan si drive CD, DVD ama flash ka daaqadaha login utility soo kabashada. The file .exe soo bixi dambe loo isticmaalaa in lagu kabaha kombiyuutarka. Marka computer ka waddaa, liiska lambarada la ahbaa doonaa oo user waxaa loo baahan yahay in la qaato tirada dhalinta iyo iyaga galaan goobta ka soo kabashada login. Goobta soo kabashada ayaa isku dayi doonta inay ogaato sirta kala duwan ee qaybaha kala duwan ee nidaamka qalliinka daaqadaha. Qalab kabashada Tani waxay ku lug leedahay isticmaalka sirta iyo decryption ee codes oo sidaas daraaddeed waxay u baahan tahay yaqaan ah la.
Dhammaan qalabka cracker password yihiin aad u faa'iido badan oo dheeraad ah si haddii user ee aan u baahnayn Dib-u-rakibidda dhibaatada nidaamka qalliinka .Waxaa la daaqadaha dib-u-rakibidda waa in dhammaan xogta ku lumo nidaamka lagu rakibay nidaam cusub hawlgalka. Waxaa jira qalab badan oo cracker password halka kasta oo ka mid qalab uu ku habboonyahay nidaamka qalliinka gaar ah. Sirta Windows waxaa si fudud dillaac isticmaalka a Downlaods Linux CD, DVD ama flash drive. Waxaa ka mid ah habka ugu fiican inkastoo ay ka duulaan u isticmaala cusub ee Windows.
> Resource > Windows > Top 5 Windows Tools Recovery Password